Home Boky mahatsiravinaComics FAMERENANA: Sary an-tsary ny sary 'Ice Cream Man' dia mendri-piderana
by Keith Foster Janoary 11, 2021
nosoratan'i Keith Foster Janoary 11, 2021
A delectable tantara mampihoron-koditra mahatsiravina, Ice Cream Man (Sary), miafina ao ambanin'ny fonony mamitaka ao amin'ny fivarotana tantara an-tsary eo an-toerana.
Ny fonon'ny nomerao voalohany – ary koa ny fonosan'ny Volume One Trade – dia mampiseho lehilahy gilasy mitsikitsiky miloko manga, mitazona fanompoana vaovao ho an'ny ankizy mitsiky manoloana ny ambadika mavokely. Ny tantara manaraka dia manomboka amin'ny fifanakalozana mahafinaritra eo amin'ny tovolahy sy ilay gilasy. Rehefa niverina nody anefa ilay zazalahy dia maizina ny raharaha. Miarahaba ny ray aman-dreniny izy, maty teo amin'ny latabatra an-dakozia, ary hala izay antsoina hoe "poizina indrindra eto an-tany".
Ity hazakazaka pejy ity dia mikrokosmin'ny andian-tantara: aza mahazo aina loatra; ny olana dia miala amin'ny pejy.
Ny laharana voalohany an'ny Ice Cream Man avy amin'ny sary an-tsary dia mamaritra ny zavatra ho avy.
Isaky ny laharana Ice Cream Man dia tantara mitokana, mitantara angano hafa izay mifandray amin'ny endrika miafina titulo. The Ice Cream Man - nantsoina hoe “Namana. Loza. Andriamanitra. Demony ”– Mijoro eo amin'ny toerana misy zava-mahatsiravina, olon-dratsy izay mamaly ny famoahana azy isaky ny olana. Tantara vitsivitsy ao, misy endrika mifanohitra miseho amin'ny zanak'omby antsoina hoe Caleb. Ny fifandraisana misy eo amin'ny roa tonta dia mivoatra, na dia miadana aza, mandritra ny olana manaraka. Manana tantara iraisana izy ireo, ary ho avy ny fifandonana.
Ny zavakanto nataon'i Martin Morazzo (pensilihazo / inks) sy Chris O'Halloran (mpandoko loko) dia manompo tsara ny tantara sy mandaitra mandritra ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny sary mahatsikaiky sy hafahafa mifikitra ao an-dohanao. Mahery ny fanoratan'i W. Maxx Prince, amin'ny fampiasana fitaovana isan-karazany mba hisy vokany lehibe.
Diniho ny hoe "Ballad of the Falling Man" (Laharana Dimy), tantara iray voarakitra an-tsehatra niakatra an-jatony zato, ary ny "Stranger Neopolitan" (laharana fahenina), izay tsy misy teny Sliding Doors-na tantara mahafinaritra izay misy ny lalan'ny mpandeha an-tongotra miovaova lehilahy manome valiny telo samy hafa. Ny olona miavaka amin'izany dia ahitana ny “Rainbow Sprinkles” (Laharana 2), tantaran'ny mpivady mpidoroka zava-mahadomelina, ary “Good Ol 'Fashioned Vanilla” (Laharana 3), ny tantaran'ny fahagagana iray izay mitady fahagagana mitady ny tohiny ny lalany malaza, efa am-polony taona maro. Ireto misy tantara tokony hanjavona eo amin'ilay lohanao rehefa avy eo, mitaky fandinihana ary famakiana fanampiny.
Izany rehetra izany dia voalaza fa tsy tonga lafatra ilay boky. Mampametra-panontaniana ny hevitry ny mpanoratra aho amin'ny famerana ny toe-javatra lehibe kokoa misy eo amin'ny Ice Cream Man sy Caleb. Mihamalemy izy io fa tsy manatsara ny tantara mijoro irery. Na dia misy toe-javatra lehibe kokoa ao amin'ny tanàna iray voakasik'izany (na voan'ny aretina), ny tsy fisian'ny famahana olana olombelona koa dia mahalasa saina ahy. Ahoana no tsy tsikaritr'ireny fisehoan-javatra mahatsiravina ireny, indrindra ireo olo-malaza mpitsikilo nampanantenaina tao amin'ny laharana voalohany?
Fanoherana malefaka ireo, na izany aza, lehibe noho ny tantara mampihetsi-po sy ny haavon'ny fifaliana. Misy zavatra maharesy lahatra momba ny tantara maizina ihany koa. Ireny tantara ireny dia mampiaiky ny fiainana amin'ny fomba fanajana ny haizina manome fankasitrahana iray ny mazava. Namaky imbetsaka ireo boky aho ary mikasa ny hiverina bebe kokoa.
Ice Cream Man efa lasa ny marika fanontana roa-polo sy fanampiny ampiana ny fitoeram-bokinao. Hafahafa sy tsy milamina ny tsiro, nefa manome valisoa rehefa avy levona.
Chris O'HalloranIce Cream ManSary ComicsMartin MorazzoW. Maxwell Prince
'Clarice' Mbola Miady Amin'ny Fotoana Ofisialy Avy Amin'ny Series
Ny karan-doha amin'ny fandatsahan-dra dia famoahana ny fako tamin'ny taona 1990 ...
Volana fieboeboana mahatsiravina: mpanoratra Ricardo Henriquez
Miorina amin'ny Novel Nosoratan'i: 'The Birds' nataon'i ...
Volana mirehareha mahatsiravina: 'Dracula' sy ilay filaharana tsy azo lavina ...
Volana fieboeboana mahatsiravina: Mpanoratra / Tale Vicente Francisco Garcia
Volana mirehareha mahatsiravina: mpanoratra Mark Allan Gunnells
Miorina amin'ny Novel Nosoratan'i: 'The Hellbound Heart' ...
Miorina amin'ny Novel Nosoratan'i: 'Psycho' nataon'i Robert ...
Famerenana ny tantara an-tsary: ​​'Zanaky ny fasana' dia ...
Miorina amin'ny Novel Nosoratan'i: 'Ratman's Notebooks' nataon'i ...